नेपालमा गर्ने भनिएको चिनियाँ खोपको ‘क्लिनिकल ट्रायल’ रोकिएको हो ? - jagritikhabar.com
नेपालमा गर्ने भनिएको चिनियाँ खोपको ‘क्लिनिकल ट्रायल’ रोकिएको हो ?
काठमाडौ , १७ भदौ ।
केही दिन अगाडि राष्ट्रिय स्तरका सञ्चारमाध्यममा एउटा समाचारले निकै चर्चा पायो। त्यो चीनले विकास गरेको कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल हुनेबारेको समाचार थियो।
चीनको सिनोभाक भ्याक्सिनको होङ्सी सिमेन्टमा कार्यरत एक हजार चिनियाँ नागरिकमा परीक्षण गर्नका लागि नेपालले अनुमति दिएको समाचार निकै चर्चामा आएको थियो।
तर, त्यसको केही दिनमै उक्त कार्य तत्कालका लागि रोकियो भन्ने समाचार सार्वजनिक भए। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले अनुसन्धानकै चरणमा रहेको जनाएको छ।
परिषद्ले बाहिर आए जसरी खोपका क्लिनिकल ट्रायल नरोकिएको तर, विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदिप ज्ञवालीले सबैको प्रक्रिया जारी रहेको बताए।
“बाहिर कुरै नबुझेर समाचार आइरहेका छन्। जसले गर्दा जनमानसमा भ्रम फैलिरहेको छ। यो क्लिनिकल ट्रायल एक दुई दिनमा सम्पन्न हुने कुरा होइन्,” डा. ज्ञवालीले भने, “विभिन्न चरणमा काम भइरहेको छ। नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै अनुसन्धानकै चरणमा छ।”
विभिन्न देशमा उत्पादन भएका भ्याक्सिनको नेपालको हालको विषम परिस्थितमा प्रयोगमा ल्याउनुपूर्व तिनको प्रभावकारीता सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नु आवश्यक देखिएको भन्दै उनले विस्तृत अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ।
हाल अक्सफोर्ड ग्रुसले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन (chAdox1 nCov-19), रूसले निर्माण गरेको भ्याक्सिन (Sputnik-v), चीनले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन (Sinovac) लगायतका विश्वमा अनुसन्धानरत रहेका भ्याक्सिनको नेपाली जनसमुदायमा प्रभावकारीता र असरबारे अनुसन्धान गर्नेबारे छलफल भइरहेको तर निर्णय भइनसकेको उनको भनाइ छ।
केही दिन अगाडि ८० जना विज्ञहरू नेपाली जनसमुदायबारे थप अनुसन्धान गरेर मात्र क्लिनिकल ट्रायल गर्न सुझाव आएकाले त्यही अनुसार अगाडि बढिरहेको उनले बताए।
ज्ञवालीका अनुसार विश्व समुदायमा भएको अनुसन्धानको स्थिति, नतिजा र प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै परिषद्ले आफ्नो निर्देशिका अनुसार मात्र तेस्रो चरणको ट्रायल कार्यान्वयमा जानेछ।
यस किसिमको कुनै पनि राष्ट्रियस्तरका अनुसन्धानहरू कार्यान्वयमा गर्नुपूर्व परिषद्को आचारसंहिता बोर्डको अनुमति अनिवार्य हुन्छ। सो परीक्षणका लागि परिषद्ले अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग तथा सरोकारवाला स्वास्थ्य अनुसन्धान विज्ञ, संस्था र निकायसँग समन्वय गरी अनुसन्धानको तयारी गरिरहेको छ।
यसको प्रक्रिया मात्र अगाडि बढेको तर, जनसमुदायमा भ्याक्सिन प्रयोगबारे निर्णय भइसकेको छैन।
यो विषयमा अन्यौलता बढेपछि परिषद्ले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। सदस्य सचिव डा. ज्ञवालीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमले चिनियाँ भ्याक्सिनको ट्रायल रोकिएको भन्दै समाचार सम्प्रेशण गरेर भ्रम फैलाइरहेको भन्दै प्रष्ट पार्न विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपरेको बताएका छन्।